कहिले काटियो बिदा?
काठमाडौं, २७ पुस । ०६२/६३ को जनआन्दोलनलगत्तै गठन भएको सरकारले २७ पुसमा मनाइने गरेको पृथ्वीजयन्तीलाई सार्वजनिक बिदाको सूचीबाट हटायो । त्यसयता दश वर्ष सरकारले बिदा दिएको छैन ।
तर, त्यसवेला के–कति कारणले बिदा कटौती भएको हो भन्नेबारे सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने मैनालीले बताए ।
‘अहिलेकै सरकार कति दबाबमा छ, त्यो वेलाको परिस्थिति अहिलेजत्तिको सहज थिएन । शान्तिवार्ता चलिरहेको थियो, राजनीति अर्कै थियो । त्यो वेलालाई अहिलेको सन्दर्भमा हेर्न मिल्दैन,’ मैनालीको तर्क छ ,नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
तर, गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले भने बिदा कटौती गर्ने आफ्नो निर्णयबारे कोइराला पछिसम्म दोधारमा रहेको बताए । ‘हामीले यो निर्णय उचित गरेनौँ कि भन्ने उहाँलाई पछिसम्म लागिरहेको थियो, तर उहाँले त्यसलाई उल्ट्याउने साहस गर्न सक्नुभएन ।
त्यो परिस्थिति भएन,’ त्यो वेलाका एक मन्त्रीले अनौपचारिक कुराकानीमा बताए ।
किन फिल्म खेल्न कम गर्दै छ दयाहाङ ?, वाग्मतीमा माछा र डुंगा !
यस्तो पो आयो कुरो, नेपाली प्रजातन्त्रको नै पुनसंरचना गर्नुपर्छ
राजपाले अध्यक्षमण्डलको संरचना हटाउँदै, क्रांग्रेस जिल्ला सभापति भेला सुरु
असुली प्रेरित बन्द, आल्रकारिक उच्चताको सामन्तवाद, महिला र लिभिङ टुगेदर